सानाका लागि good राम्रो पुस्तकहरू | वर्तमान साहित्य
सानाका लागि good राम्रो पुस्तकहरू
अर्को दिन मैले तपाईंलाई एउटा लेख लेखें जुनमा म एउटा प्रस्तुत गरे छोटो फिल्म आदर्श बच्चाहरु पढ्न सुरु गर्न को लागी र तिनीहरू यसलाई उनीहरूका लागि सकारात्मक कुराको रूपमा देख्दछन्। यदि तपाईंले यो देख्नु भएन भने, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
ठिक छ, आज म तपाईंलाई उनीहरूको लागि literary साहित्यिक सिफारिशहरू लिएर आउँछु, सानाका लागि good राम्रो पुस्तकहरू यसले उनीहरूलाई पढ्ने क्रममा छोडिनेछ र तिनीहरू एक पछि अर्को पुस्तक पढ्न जारी राख्नेछन्। तिनीहरू बिभिन्न उमेरहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ ताकि तपाइँलाई समस्या पर्दैन जब तपाइँको बच्चाको उमेरको लागि सहि पुस्तक फेला पार्ने कुरा आउँदछ। हामी तपाईंलाई तिनीहरू सँगै छोडिदिन्छौं!
1 घिचुवा सानो क्याटरपिलर (एरिक कार्ल)। ० देखि years बर्ष
2 म तिम्रो लागि राक्षसहरुलाई मार्नेछु (सान्ती बाल्मेस)। Years बर्षबाट
3 Granny Opalina (मारिया पन्सल)। Years बर्षबाट
4 Friar Perico र उसको गधा (जुआन Muñoz Martín)। Years बर्षबाट
5 Manolito Gafotas (एल्विरा Lindo)। १० बर्षबाट
घिचुवा सानो क्याटरपिलर (एरिक कार्ल)। ० देखि years बर्ष
यो पुस्तक ० देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ। यो एक अन्तर्क्रियात्मक र उल्टाउने पुस्तक हो जसले सानालाई क्याटरपिलरको मेटामोर्फोसिसको जादू सिकाउँछ। सानो क्याटरपिलर यस कथाको पातहरू माथि सर्दछ, किनकि यसले यसको पातहरू खान्छ (शाब्दिक) सम्म, अन्तमा, यो एक सुन्दर पुतलीमा रूपान्तरण हुन्छ।
एक धेरै रंगीन पुस्तक जसले घरका साना बच्चाहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ।
म तिम्रो लागि राक्षसहरुलाई मार्नेछु (सान्ती बाल्मेस)। Years बर्षबाट
२०११ मा शुरू भएदेखि मात्र 32२ पृष्ठहरूको पुस्तक मात्र सफल भयो। मार्टिना राति डराउँछिन्। उसको विश्वास छ कि उसको कोठाको भुईं मुनि राक्षसहरु बस्ने संसार लुक्छ जुन उनीहरूको टाउको तल हिंडे। यदि दुबै संसार बीचको सीमा भाँच्दा के हुन्छ? यो डर परिवर्तन हुन्छ जब एक दिन दुबै संसार एकसाथ आउँछन्।
Granny Opalina (मारिया पन्सल)। Years बर्षबाट
ईसाले उनको हजुरआमामा निबन्ध लेख्नुपर्‍यो। तर उनी उनीहरुलाई भेटिदिन सकेकी छिन्, उनी एक मोडेल हजुरआमा आविष्कार गर्छिन् कि उनका साथीहरुका सबै राम्रा गुणहरु संग। सबै समस्याहरू हजुरबा हजुरआमाले भेट्टाउँछन् र उसलाई उपहार दिन सुरु हुन्छ। तपाईंको साथी ईर्ष्यालु छन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ र यदि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्न भने दु: खित छ। ईसालाई कसरी समाधान गर्ने थाहा छैन, जबसम्म उनको बुबा एक ठूला-बुआ, काकी न्युभ्ससँग देखा पर्दछन् जबसम्म सबै कुरा ठीक हुँदैन। त्यसोभए ईसाको आफ्नै हजुरआमा छ। उनी धेरै खुसी छिन् र उधारो लिएको हजुरआमालाई उनका सबै उपहारका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गर्छिन्।
Friar Perico र उसको गधा (जुआन Muñoz Martín)। Years बर्षबाट
मलाई स्कूलमा मेरो कक्षाको शेल्फमा यो पुस्तक हेर्दा म स्पष्टसँग सम्झन्छु। यो लगभग age वा years बर्ष उमेरको लागि सिफारिस गरिएको हो।
यो बीस friars, सालमान्का नजिक एक पुरानो कान्वन्ट मा थियो। कपाल टाउको, धेरै सेतो दाह्री र प्याच बानी, तिनीहरू एकल फाईलमा हिडे फ्रे पेरिको र उसको गधाको विचलनले कन्भेन्टको शान्त जीवनलाई विचलित तुल्याउँछ। सुरुमा भिक्षुहरूले उहाँलाई स्वीकार गर्दैनन्, तर अलि-अलि गर्दै उनीहरूले उसको भलाई र केही अरु जिज्ञासु चीजहरू भेट्टाउँछन्।
Manolito Gafotas (एल्विरा Lindo)। १० बर्षबाट
Carabanchel छरछिमेक Manolito Gafotas र उसका साथीहरूको दैनिक जीवन कुनै पनि अन्य बच्चाको जस्तै छ। ओभरफ्लो गर्ने कल्पना र क्यारिज्माले भरिएका चरित्रहरूको साथ, एल्भिरा लिन्डोले हामीलाई यो स्पेनी साहित्यको क्लासिक र प्रख्यात चरित्रको रोमांच बताउँछिन्।
१० बर्षको उमेरका लागि हामी यी अरूलाई सिफारिस गर्दछौं:
"ह्यारी कुम्हार र दार्शनिकको ढुone्गा"।
"ग्रेगको डायरी" को सम्पूर्ण संग्रह।
"दुष्ट बच्चाहरूको लागि कवितामा कथाहरू।"
शुभ दिउँसो एक किताब पसलबाट रोक्नको लागि यी पुस्तकहरू केहि प्राप्त गर्नका लागि हो, हैन? खुशी सोमबार!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » सानाका लागि good राम्रो पुस्तकहरू
डेभिड बालडाकीले बिर्सेको जोन पुलरको दोस्रो उपन्यास